Meteosat satellite: hunhu, mashandisiro uye kukosha | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 06/05/2021 08:30 | Meteorological Zviridzwa
Parizvino, kune kukosha kuri kukura kwenzanga nekuda kweruzivo rwezviitiko zvakasiyana uye mhedzisiro ine zvakashata zviitiko zvakasikwa. Inotsanangurwa pamwe nekufarira kwakawanda muzvinhu zvezvakatipoteredza. Zvese izvi zvinopedzisira zvave kufarirwa nekuda kwekuparadzirwa kukuru kwemamiriro ekunze emamiriro ekunze kuburikidza nenzira dzakasiyana dzekuparadzira pasi rese. Iine iyo meteosat satellite Mifananidzo inogona kuwanikwa kuburikidza nema sensors akaisirwa neruzivo rukuru runogona kutipa huwandu hweruzivo nezve zviitiko zvemamiriro ekunze zvinoitika mudenga munguva chaiyo.
Naizvozvo, isu tichaisa iyi chinyorwa kukuudza kuti ndeapi hunhu uye kukosha kwemeteosat satellite.
1 Kufambira mberi mumamiriro ekunze
2 Kubatsira kwemeteosat satellite
3 Meteosat satellite hunhu
Kufambira mberi mumamiriro ekunze
Nekuda kweshanduko yepasirese pane mafambiro ari kukura uye kuda kwekunzwisisa zvirinani mamiriro emamiriro ekunze emuchadenga. Mifananidzo yakawanikwa kuburikidza nema sensors akaiswa pamapuratifomu uye iyo meteosat satellite inoshandiswa kuita zviito mukati nyaya yekudzivirira, kuchenjerera, kudzora njodzi uye kugadzirisa nzvimbo dzakakanganiswa neakasiyana echisikigo zviitiko zviripo. Tinoziva kuti nekushanduka kwemamiriro ekunze zviitiko zvekunze zvakanyanya zvakanyanya zviri kuwedzera zviri zviviri mukuwanda uye kusimba. Izvi zvinoita kuti kure kure kutarisisa chishandiso chakakosha pakuongorora uye kuongorora kwenjodzi dzechisikigo.
Iyo meteosat satellite inobatsira kuve nemifananidzo yakawanda pasirese yepasirese ingangoita munguva chaiyo inobatsira kutambira mhedzisiro inogona kuitika inogona kuitika nekuda kwechiitiko chechisikigo. Semuenzaniso, kuputika kwegomo reIcelandic volcano Eyjafjallajokull kwakaparadzanisa traffic dzese dzendege munzvimbo zhinji dzekuchamhembe kweEurope ndokumanikidza kudzimiswa kwendege munzvimbo zhinji dzenyika. Izvi zvakadzivirirwa nekutenda kune mupiro wekuona kure kure uchishandisa meteosat satellite. Imwe nyaya ndeyekuti inomiririra kuvandudzwa kwakanyanya mukudzivirira huwandu hwevanhu kubva padhuze nekuuya kwecyclogenesis uye kwakabatsira kuchengetedza zviwanikwa uye kudzikisa kurasikirwa kwevanhu.
Kutenda kune iyo meteosat satellite, akasiyana masystem ekutanga yambiro akagadzirwa kuyambira nezvekushanduka uye kuoneka kwemoto wesango. Nenzira iyi, manejimendi marongero anogona kuitwa kupedza moto uye kudzikisira kukuvara kwekuchengetedza zviri nani nharaunda. Iko mukana wekugadzira aya marongero emoto unoburitswa nekuda kwema sensors nyowani ayo anotendera iyo tembiricha inoburitswa nepasi repasi kutorwa.
Kubatsira kwemeteosat satellite
Nesateti yemeteosat isu tine ruzivo rwekugamuchira ruzivo kana zvasvika pakubata nezvakasiyana zvidzidzo zvezvakatipoteredza zvinoshandiswa pakuwongorora kwezviitiko zvine chekuita nezve zvakashata zviitiko zvakasikwa senge kwakanyanya kusagadzikana kwemhepo, kuputika kwemakomo mumhepo, masango makuru anopisa, nezvimwe. Isu tinofanirwa kunzwisisa kuti iyo meteosat satellite ine maficha makuru ekudzivirira mune meteorology.
Kuti uishandise, nzira dzakasiyana dzakasiyana dzinoteverwa uye mhedzisiro inowanikwa iyo inoshanda semubatsiri wekutora sarudzo neanokwanisa manejimendi mumunda wezvakatipoteredza. Kukosha kwaro kwakakura kwazvo zvekuti rinopa ruzivo rwakakosha kuti rikwanise kugadzirira zvakafanira mamiriro ezvemamiriro ekunze, zvichideredza mhedzisiro inogona kuitika yemamiriro ekunze aya mudunhu. Izvi zvinogona kuzivikanwa nekuda kwekuona kure kure kwemadutu makuru uye nekuenderera kwavo kushanduka.
Tinogona zvakare kukoshesa rudo rwekuputika kwemadota anoputika ayo anogona kuve akakomba kudzikira kwepasirese uye achikonzera kurasikirwa kusingaverengeki kwehupfumi. Semuenzaniso, kana tichigona kuziva kuwanda kwedota rinoputika, tinogona kuronga kunatsiridza kutakura kwemhepo uye kwepasi uye kushandisa nzira yakajairwa yekutarisa kufambira mberi kwemakomo anoputika. Tinogona zvakare kudzora kana kudzivirira kusvibiswa kwezvakatipoteredza nekuda kwesarufa dioxide inoramba ikamira mukumira mushure mekuputika kwegomo.
Chimwe chinangwa cheiyo meteosat satellite kugona kuve neuongorori hwakawanda hwezvinoitika pamoto wemasango kubva panguva yekuonekwa kwavo kusvika pakutsakatika kwavo. Kutenda kune ino satellite, zvinokwanisika kuyera kukuvara uye mutengo wekugadzirisa. Masayendisiti anotarisira kuburitsa mifananidzo yenjodzi inounza huwandu hwakawanda hwezvinhu zvinogona kutsanangura akasiyana mamiriro ezvemamiriro ekunze akadzidza nekufarira kufanotaura, manejimendi uye nekuronga mabasa ane hukama nemhando yega yechiitiko. Sezvauri kuona, Izvo zvinonyanya kubatsira kugona kuziva zviri kuitika papasi redu uye nekupfupikisa nezvazvo.
Kubudirira kunogadzikana zvakare kunobatsira kubva pakuronga kwenzvimbo nekutenda kubhawa rakavhurika rekuparadzirwa kweruzivo rwenharaunda rwunotsigirwa neepuratifomu yemahara uye yakavhurika yesoftware.
Meteosat satellite hunhu
Iwo akateedzana e geostationary satellites ayo anodzorwa neEUMETSAT. Kune nzvimbo inowanikwa panharaunda yeGreenwich meridian ne Ecuador inoenda pakukwirira kwemakiromita 35800. Nekuda kwechinzvimbo icho satellite iripo, inogona kuve nemuchadenga ine kumhanya kweshanduro inoenderana neyekutenderera kwePasi. Nenzira iyi, tinogona kugara tichiwona chikamu chimwe chete chenyika. Iyi inzvimbo inoenderana nedenderedzwa rakanangana neGulf yeGuinea uye inovhara kusvika pamadhigirii makumi matanhatu nematanhatu eruzivo. Iyo Iberia Peninsula inowanikwa munzvimbo ino yese uye inogona kusarudzwa kuti iongorore dzakasiyana mamiriro ekunze angave anotifadza.
Iye zvino tava kuzodzidza mashandiro anoita satellite iyi. Iyo inoshandisa VIS, IR uye VA mifananidzo yega yega hafu yeawa. Iyo inokwanisa kuwana mifananidzo yega yega hafu yeawa kuitira kuti tigone kuwana yakanaka temporal resolution yekutarisa akasiyana emamiriro ekunze mamiriro sekuparadzira uye kusiana kwegore chifukidziro. Isu tinoziva kuti kusviba ndiyo imwe yezvinhu zvikuru zvekuziva shanduko yedutu, semuenzaniso. Mifananidzo yakati wandei inowanikwa yega yega hafu yeawa mune dzakasiyana-siyana dzemagetsi emagetsi: Inoonekwa (VIS), Thermal Infrared (IR) uye Water Vapor Infrared (VA) inoenderana nemhando nhatu dzemasaenzi ayo satellite inotakura.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve meteosat satellite uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Meteorological Zviridzwa » Satellite meteosat